sawirro | Somaliland.Org
Tag Archives: sawirro
KULMIYE oo qaddiyadda Somaliland gaadhsiiyay shirwayne caalami ah (daawo sawirrada)
May 21, 2008	Xisbiga Kulmiye ayaa bilaabay olole xooggan oo uu Somaliland ugu baadigoobayo saaxiibo caalami ah oo ka caawiya dhisidda dimuqraadiyadda, horumarinta bulshada iyo xasilinta aqoonsi siyaasadeed, wakhti ay xukuumada hanan kari la’dahay saaxiibadii shisheeye ee dalku hore u lahaa. kulmiyesawirrosomaliland
Xafladii Xuska 18ka May Ee Toronto, 2008
May 19, 2008	Waxaa habeenkii Axadii si weyn looga dabbaal degay xuskii sanadguurada 17 aad ee Somaliland oo ay ka soo qayb galeen dadweyne gaadhayay illa 1500 oo qof. Waxay ahayd xaflad si qurux badan loo soo agaasimay hawsheedana ay isku soo duba rideen ururka Horumarinta Somaliland ( SDO) iyo ururka haweenka Somaliland Ee Toronto oo loo yaqaan Somaliland Women Association.
Xuska Maalinta Qaranimada Somaliland 18 May 2008 Mysore India
May 19, 2008	Xuska maalinta sanad guurada 17aad ee Jamhuuriyada Somaliland 18 May 2008 ayaa lagu Qabtay Dalka India ee gobolka Karnataka Magaalada Mysore, xafladaas oo si heer sare ah ay u so agaasimeen ururka ardayda Somaliland.
News, Weriye-Dubad, xw
Hoggaamiyayaasha Saddexda xisbi oo Dadweynaha Hargeysa, Burco iyo Boorame kala qaybgalay xuska 18ka May iyo Nuxurka Khudbadihii ay u jeediyeen
May 18, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Hoggaamiyayaasha Saddexda xisbi ee Somaliland ayaa maanta kala qaybgalay xuska munaasibadda 18ka May dadweynaha magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Boorame, iyaga oo khudbado uga jeediyey dadweynaha fagaarayaal.
Isu soo bax ballaadhan oo Maanta ka dhacay Fagaaraha Xarunta Dhexe ee Xisbiga KULMIYE iyo Nuxurka Khudbadihii hoggaanka xisbigu u jeediyey
May 7, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Boqolaal ka mid ah Taageerayaasha Xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE iyo dadweyne kale oo ka kala yimi dhammaan xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa saaka isugu soo baxay Xarunta guud ee Xisbigaas ee Galbeedka Magaalada Hargeysa, halkaas oo Hogaanka iyo Masuuliyiinta kale Xisbigu hadalo uga jeediyeen.